Wax taaj oo kale duritaanka - Chapman Technology Co., Ltd.
Qayb guuleysata waxay ka bilaabataa caaryo si wanaagsan loo qaabeeyey. Nidaamkan adag ee saxda ah wuxuu go'aamiyaa qayb ka mid ah wax soo saarka iyo kharashka nolosha wuxuuna tixgeliyaa qaybaha muhiimka ah ee naqshadeynta caaryada iyadoo loo hoggaansamayo qeexitaannada gaarka ah ee qayb ka mid ah.
Waxaa loo tixgeliyey mid ka mid ah Shanta Fure ee Guusha, naqshadeynta caaryada saxda ah iyo dhismaha caaryada ayaa kaa caawin doonta yareynta qiimaha, kordhinta tayada iyo hagaajinta waxqabadka. Abuuraha Chapmanshirkaddu waxay taageeri kartaa barnaamijyo kala duwan oo naqshadeynta softiweerka ah, oo ay ku jiraan UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS iyo wixii la mid ah. Dabcan, waxaan kuusoo bandhigi karnaa heerar kala duwan oo naqshadeynta caaryada ah: DME, HASCO, MEUSBURGER, LKM ， iyo sidoo kale falanqaynta qaabdhismeedka si loo qiimeeyo dhamaan naqshadaha iyo qeybaha horumarka ka hor.
Abuuraha Chapman qalabka wax lagu duubo waxay bixiyaan dabacsanaan xagga socodsiinta dhammaan noocyada qalabka kululeeyaha. Waxaan ku takhasusay wax soo saarka wax soo saarka ee dalabyo kala duwan iyo sidoo kale warshado gaar ah oo ay ku jiraan Automobile ， caafimaad, qalabka elektarooniga ah, isku xirayaasha, warshadaha, difaaca, gaadiidka, iyo macaamilka.
Abuuraha Chapman Shirkaddu waxay leedahay mashiinka cirbadeynta laga bilaabo 90 illaa 600 tan, Waxaan kaa caawin karnaa hagaajinta iyo hagaajinta naqshadeynta alaabtaada si loo gaaro natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah si loo buuxiyo shuruudahaaga.
Awoodaha Wax Kordhinta
1. Qaab-dhismeedka adag ee weyn
2.Small saxsanaanta wax taaj oo kale
3. Gali wax taaj oo kale ah
4.LSR & Rubber wax taaj oo kale
Kooxdayada at Abuuraha Chapmansi dhow ula shaqeyno shuraakadayada ganacsiga si loo bixiyo adeegyo qiimo leh oo loogu talagalay warshadaha hogaaminaya qaybaha adag. Hoos waxaa ku yaal wax yar oo ka mid ah adeegyadan qiimaha lagu daray:
• Kulamo badan oo qaybo badan ka kooban
• Dayactirka caarada & Dayactirka
• Barnaamijka Wareejinta Caaryada iyo Nidaamyada
• Alxanka Xiinka
• Kanban, Barnaamijyada Keydinta, iwm.
• Ka caawi dib u dejinta dadaalka
• Qurxinta Qeybta
• Midabbada Caadiga ah iyo Midabka Isbeddelka Degdegga ah